Maxaad kala socotaa magaalada ugu nolosha wanaagsan caalamka? | Radio Hormuud
Qiimeyntan oo ay sameysay hay'adda sahminta dhaqaalaha ee lo soo gaabiyo (EIU) ayaa waxaa lagu qiimeeyay 140 magaalo iyada oo si gaar ah loo eegayo arrimo ay ka mid yihiin xasiloonida, kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada iyo helitaanka daryeelka caafimaadka.
Balse feyriska Corona ayaa noqday waxa go'aaminaya liiska snadkan iyo sida kaalimaha loo kala galay.
Osaka oo ku taalla dalka Japan ku xigtay magaalada Auckland
Magaalooyiinka Australia sida Adelaide ayaa iyaguna kaalimo wanaagsan soo galay
"Auckland in ayaa kaalin ahaan sare u kacday taasi iyada loo aaneynayo qaabkii ay ugu guuleysatay ee ay u wajahday cudurka Covid-19, taasi oo bulshada fursad u siisay inay isu furnaadaan magaaladuna ay kaalin wanaagsan gasho," ayaa lagu yiri warbixinta hay'adda EIU.
"Magaalooyinka Yurub ayaa si gaar ah ugu liitay qiimeynta sanadkan," ayay intaasi raacisay.